ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေများ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂျော့ရှ်တောင်းမြို့၊ ဂျီဘရော်လ်တာ၊ ဝက်စ်ဘေးမြို့
အင်္ဂလိပ်၊ ဂရိ၊ တားကစ်ရှ်၊ စပိန်၊ Llanito, Pitkern
ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေ ၁၄ ခုသည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နယ်မြေများ ဖြစ်ကြသည်။ ယခင် ဗြိတိသျှအင်ပါယာ၏ လက်အောက်ခံ နယ်မြေများဖြစ်ကြပြီး လွတ်လပ်ရေးရယူခြင်းမရှိပဲ ဗြိတိသျှနယ်မြေများအဖြစ် တည်ရှိနေကြသည်။ တစ်နယ်မြေချင်းစီ၌ အုပ်ချုပ်သူရှိသော်လည်း ဘုရင်မ အယ်လီဇဘက် ဒုတိယ သည် နိုင်ငံ့ဦးသျှောင်ဖြစ်သည်။
ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေ (British Overseas Territory) ဟူသည့် အမည်ကို "၂၀၀၂ ခုနှစ် ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေများ အက်ဥပဒ"အရ British Dependent Territory ကို ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နယ်မြေများရှိ ခန့်မှန်းခြေလူဦးရေမှာ ၃၅၀၀၀၀ ခန့်ဖြစ်ကာ ကုန်းမြေဧရိယာစုစုပေါင်းမှာ ၆၆၇,၀၁၈ စတုရန်းမိုင် (၁,၇၂၇,၅၇၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေ ၁၄ ခုမှာ :
အက်ခရိုတီရီနှင့် ဒက်ခရီလီယာ မြေထဲပင်လယ် (ဆိုက်ပရပ်စ်) ၂၂၅ ၁၄,၀၀၀ (ဗြိတိသျှ စစ်ဝန်ထမ်း တစ်ဝက်ခန့်); အက်ပီစကိုပီ တပ်မြေ
အန်ဂီလာ ကာရစ်ဘီယံ နှင့် မြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ Strength and Endurance ၉၁ ၁၃,၅၀၀ တောင်ကြားမြို့
ဗမျူဒါး မြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ Quo fata ferunt (လက်တင်ဘာသာ: "Whither the Fates carry [us]") ၅၄ ၆၄,၀၀၀ (၂၀၀၇ ခန့်မှန်း) ဟာမိတန်မြို့
ဗြိတိသျှ အန္တာတိက နယ်မြေ အန္တာတိက Research and discovery ၁,၇၀၉,၄၀၀ ဆောင်းရာသီ၌ ၅၀၊ နွေရာသီ၌ ၄၀၀ ကျော် ရိုသီရာ (အဓိက အခြေစိုက်စခန်း)
ဗြိတိသျှ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ နယ်မြေ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ In tutela nostra Limuria (လက်တင်ဘာသာ: "Limuria is in our charge") ၄၆ အမေရိကန်နှင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ ၃,၀၀၀ ခန့်  ဒီယေဂိုဂါစီယာ (အခြေစိုက်စခန်း)
ဗြိတိသျှ ဗာဂျင်အိုင်းလန်း ကာရစ်ဘီယံ နှင့် မြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ Vigilate (လက်တင်ဘာသာ: "Be watchful") ၁၅၃ ၂၇,၀၀၀ (၂၀၀၅ ခန့်မှန်း) ရုတ်တောင်းမြို့
ကေမန်ကျွန်းစု ကာရစ်ဘီယံ နှင့် မြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ He hath founded it upon the seas ၂၆၄ ၅၄,၈၇၈ ဂျော့ရှ်တောင်းမြို့
ဖော့ကလန်ကျွန်းစု တောင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ Desire the right ၁၂,၁၇၃ ၂,၉၅၅ (၂၀၀၆ သန်းခေါင်စာရင်း) စတန်လီမြို့
ဂျီဘရော်လ်တာ အိုက်ဘေးရီးယန်း ကျွန်းဆွယ် (ဥရောပ) Nulli expugnabilis hosti (လက်တင်ဘာသာ: "No enemy shall expel us") ၆.၅ ၂၈,၈၀၀ (၂၀၀၅) ဂျီဘရော်လ်တာ
မွန်ဆာရတ် ကာရစ်ဘီယံ နှင့် မြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ ၁၀၁ ၄,၆၅၅ (၂၀၀၆ ခန့်မှန်း) ပလစ်မစ်မြို့ (မီးတောင်ကြောင့် စွန့်ပစ်ထား၊ မြို့တော်သစ်မှာ ဗရာဒမြို့ဖြစ်သည်။)
ပစ်ကိန်ကျွန်းစု ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ၄၅
(ကျွန်းစုအားလုံး) ၄၈ (၂၀၁၂) အာဒမ်စ်တောင်းမြို့
စိန့်ဟယ်လယ်နာ၊ အစန်းရှင်း နှင့် ထွစ်စတန်ဒါကူနှာ တောင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ Loyal and Unshakeable ၄၂၀ ၅,၅၃၀ အားလုံး
၄,၂၅၅ (စိန့်ဟယ်လယ်နာ တစ်ခုတည်း; ၂၀၀၈ သန်းခေါင်စာရင်း)
၁,၂၇၅ (အစန်းရှင်း နှင့် ထွစ်စတန်ဒါကူနှာ ; ခန့်မှန်း) ဂျိမ်းစ်တောင်းမြို့
တောင်ဂျော်ဂျီယာနှင့် တောင်ဆန်းဒဝစ်ကျွန်းများ တောင်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ Leo terram propriam protegat (လက်တင်ဘာသာ: "Let the lion protect his own land") ၄,၀၆၆ ၉၉ (အမြဲတမ်းမဟုတ်) ကင်းအက်ဒဝက်ပွိုင့်မြို့
တာ့ခ်နှင့် ကေးကို့စ်ကျွန်းများ လူကေရန် အာခီပဲလဂို နှင့် မြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ "Beautiful by nature, clean by choice" ၄၃၀ ၃၂,၀၀၀ (၂၀၀၆ ခန့်မှန်းသန်းခေါင်စာရင်း) Cockburn Town
↑ [ARCHIVED CONTENT] UK Overseas Territories Foreign & Commonwealth Office။ Collections.europarchive.org။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။[လင့်ခ်သေ]
↑ SBA Cyprus။ Jncc.gov.uk။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ British Antarctic Territory။ Jncc.gov.uk။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Commonwealth Secretariat – Anguilla။ Thecommonwealth.org။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၅.၀ ၅.၁ UNdata | record view | Surface area in km2။ ကုလသမဂ္ဂ (၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၉)။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bermuda။ Jncc.gov.uk။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Commonwealth Secretariat – British Antarctic Territory။ Thecommonwealth.org။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ British Indian Ocean Territory။ Jncc.gov.uk။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Commonwealth Secretariat – British Indian Ocean Territory။ Thecommonwealth.org။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ British Virgin Islands (BVI)။ Jncc.gov.uk။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ The World Factbook: Cayman Islands။ စီအိုင်အေ။ 13 February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Commonwealth Secretariat – Falkland Islands။ Thecommonwealth.org (14 June 1982)။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gibraltar။ Jncc.gov.uk။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Commonwealth Secretariat – Gibraltar။ Thecommonwealth.org (၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၂)။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၅.၀ ၁၅.၁ Montserrat။ Jncc.gov.uk။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pitcairn Island။ Jncc.gov.uk။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ UN Statistics – St Helena census 2008။ ကုလသမဂ္ဂ။ 29 June 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Territories: St Helena, Ascension, Tristan da Cunha"၊ BBC၊ ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀။ ၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vital Statistics – SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS Archived 31 January 2016 at the Wayback Machine.. 22 January 1993. CIA WORLD FACTBOOK 1992 via the Libraries of the Univ. of Missouri-St. Louis.
↑ Population of Grytviken, South Georgia and the South Sandwich Islands။ Population.mongabay.com (၃၁ မတ် ၂၀၀၉)။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ Turks and Caicos Islands။ Jncc.gov.uk (၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၉)။ ၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗြိတိသျှ_ပင်လယ်ရပ်ခြား_နယ်မြေများ&oldid=743658" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ မေ ၂၀၂၂၊ ၂၃:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။